Branddị anyị - Xuzhou Bonovo Machinery & Equipment
Ndị agha anyị:
Xuzhou Bonovo Machinery & Equipment dị na Xuzhou obodo, ndị kasị ibu & mbụ owuwu ígwè mmepụta isi nke China, ebe ọtụtụ ụwa na-ama ụdị dị ka katapila, Volvo, John Deere, Hyundai na XCMG nyekwara na wuru ha ụlọ mmepụta ihe na osisi ebe a.
Na elu n'ichepụta teknụzụ na akụ uru na ulo oru ụyọkọ, Bonovo emewo site 3 isi azụmahịa nkewa (Bonovo Mgbakwụnye, Bonovo Undercarriage Parts na DigDog) na Bonovo otu bụ mgbe niile ike na-enye gị nile di iche iche nke àgwà ígwè ngwaahịa n'agbanyeghị na ị bụ ụdị nwe, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ njedebe.
Bonovo Mgbakwụnye e raara nye na-enyere ndị ahịa inwekwu egosipụta na arụpụtaghị site na-enye elu àgwà Mgbakwụnye ebe 1998s. Akara a maara maka ịmepụta bọket dị elu, ndị di na nwunye ngwa ngwa, grapples, ogwe aka & booms, pulverizers, rippers, thumbs, rakes, breakers and compactors for all types of excavators, skid steer loader, wheel loaders and bulldozers.
Akụkụ Bonovo Undercarriage Parts nyere ọtụtụ ihe eji eji akwa akwa maka ndị na-egwu ala na ndị na-akụ dozers. Anyị ghọtara ngụkọta zuru oke nke nkedo dị elu na teknụzụ ọgwụgwọ dị elu bụ isi ihe na-akpata ihe ịga nke ọma nke akara BONOVO. Anyị undercarriage akụkụ na-wuru na ezigbo mma, pụrụ ịdabere na ogologo akwụkwọ ikike nke ị nwere ike n'ụzọ zuru ezu ịdabere na. ,000lọ nkwakọba ihe 70,000sqf nwere ike mezuo nnyefe gị ngwa ngwa, yana R&D siri ike yana ọtụtụ ndị ahịa ahịa nwere ike mezuo ihe ọ bụla ịchọrọ ịhazi ngwa ngwa.
DigDog bu ezin’ulo ohuru nke ndi otu Bonovo kemgbe 2018. Akụkọ akuko ya bidoro na 1980s mgbe ejiri ya dịka akara ịwụ na-ewu ewu na ndịda Africa. Bonovo ketara ọmarịcha akara a, ikike aha ya na ngalaba aha ya afọ 3 mgbe ọ nwụsịrị. Mgbe ọtụtụ afọ ịrụsi ọrụ ike na ahụmịhe ụlọ ọrụ nwetara, DigDog abụrụla akara a na-akwanyere ùgwù maka ndị na-egwupụta obere ihe na ndị na-agba skid. Anyị abụọ kwenyere na "Nkịta nwere ikike karịa igwu ala karịa nwamba". Ebumnuche anyị bụ ime ka DigDog bụrụ akara ama ama nke obere ndị na-egwu ala nke na-arụ ọrụ nke ọma na yad gị na okwu anyị bụ: "DigDog, onye na-egwu ala na-eguzosi ike n'ihe!"